Tafavoakan’ny zandary tamin’ny fomba niafina, tany Vangaindrano… : nalefa any Fianarantsoa ireo voasambotra sy voarohirohy | NewsMada
Tafavoakan’ny zandary tamin’ny fomba niafina, tany Vangaindrano… : nalefa any Fianarantsoa ireo voasambotra sy voarohirohy
Tafavoakan’ny zandary, tamin’ny fomba niafina, omaly vao maraina be, nentina any Fianarantsoa ireo telolahy voarohirohy ho nahafaty ilay tovovavy, fototry ny savorovoro, tany Vangaindrano. Manampy ireo ny olona dimy hafa voasambotra nandritra ilay rotaka nitranga omaly.
Tsy nisy nahita! Tao anatin’ny fotoana fohy sy tamin’ny fomba feno stratejia tanteraka no nitondran’ny zandary ireo telo lahy voarohirohy ho namono ilay tovovavy 19 taona tany Vangaindrano, niala tany an-toerana, niaraka tamin’ireo dimy lahy voasambotra nandritra ny korontana afakomaly. Nalefa any Fianarantsoa omaly izy valo lahy ireo izany. I Zafison Alexis, voatondro ho mpitarika ireo mpanao fihetsiketsehana no voasambotra farany omaly. Nataon’ny Gsis sarika am-pandriana omaly vao maraina be izy io ary izao nalefa any Fianarantsoa izao koa. Mivezivezy manerana ny tanàna andanin’izany ny mpitandro ny filaminana, ahitana ny Gsis, FIGN ary ny RFI avy aty Antananarivo. Lazain’ny olona sasany any an-toerana, fa misy amin’ireo ny milanja “lance rocket” mihitsy.
Nalan’ireo miaramila avokoa ny sakana sy ny barazy miisa 18 tao an-tampon-tanànan’i Vangaindrano. Mbola nisy kosa anefa ny barazy tany Lopary, raha ny vaovao avy any an-toerana. Voalaza fa misava ireo fiara avy any Farafangana ireo olona ireo, ary misava kara-panondro mihitsy. “Sivily ihany ireo olona misava ireo, ary ny mponina avy any Manambondro no savain’ireo ary tanany avy eo. Avy any amin’ity tanàna ity ireo voarohirohy ho namono ilay tovovavy, ka heverin’ireo mpisakana fa handeha hanampy ny namany ireo”, hoy ny fanazavana avy any Vangaindrano. Tsy mbola tonga any amin’ity toerana ity ny miramila sy ny zandary hatramin’ny ora nanoratanay.
Be fanahiana ihany ny mponina manolona izany ary mbola tsy sahy nanokatra varavarana ny ankamaroan’ireo toeram-pivarotana any an-toerana, noho ny tahotra fandrobana na doro trano. Ny didy tsy fahafaha-mivoaka ny trano manomboka amin’ny 6 ora hariva hatramin’ny 7 ora maraina.
Nisitrika aloha ireo mpanao fihetsiketsehana hatramin’ny afakomaly hariva raha ny tao Vangaindrano. Nilaza ny avy amin’ny zandary fa tsy olona avy ao Vangaindrano ireo manakorontana ireo. Efa voalazan’ny mponina any an-toerana ihany anefa fa avy amin’ny kaominina mpiray dina ny sasany amin’ireo fa tsy avy ao Lopary ihany.
Ity resaka dina ity izay nambaran’ny olona any an-toerana fa antsoina hoe “dina menavozo”. Ifampifehezan’ny fokonolona amin’ny faritra maromaro any Atsimo Atsinanana any. “Rehefa namono olona, tsy maintsy vonoina ihany koa”, hoy ny filazan’ireo mponina. Eo no mipetraka ny olana ka mahatonga ity fikasana hanao fitsaram-bahoaka ity. Ny fokonolona fehezin’ny mpiray dina tsy voasakana tsy hanao izany. Sarotra ho an’ny fanjakana ny hamehy izany, izay misy amin’ny faritra maro ny dina. Nisy ihany koa tranga mitovitovy amin’izao tany Besalampy afakomaly. Mpamono olona voasambotra notanan’ny zandary, notakin’ny olona hatao fitsaram-bahoaka, saingy mbola nilamina ny olona tany an-toerana. Raharaha mitohy…